निषेधाज्ञामा कालोबजारी : एक हजारको अक्सिमिटरलाई ३२ सय ! – Nepal Press
निषेधाज्ञामा कालोबजारी : एक हजारको अक्सिमिटरलाई ३२ सय !
२०७८ वैशाख २३ गते १८:२२
जनकपुरधाम । नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोना संक्रमण दर तीव्र गतिमा बढेसँगै देशका अधिकांश जिल्लामा अहिले लकडाउन लागू गरिएको छ । निषेधाज्ञामा अत्यावश्यकबाहेकका सेवा बन्द छन् । तर, कतिपयलाई यही मौकामा अत्यावश्यकीय सेवाको कालो बजारीको बाटो खुलेको छ । यसको ताजा उदाहरण धनुषामा अक्सिजन लेवल मापन गरिने ‘अक्सिमिटर’ मा व्यापारीले असुलिरहेको चर्को मूल्य हो ।
जनकपुरस्थित प्रादेशिक अस्पताल अगाडी रहेको सरोज सर्जिकल सप्लायर्सले १ हजार पर्ने अक्सिमिटर ३२ सयमा बिक्री गरिरहेका छन् । उक्त सप्लायर्सले पत्रकार सुरेन्द्र यादवलाई सो रकममा अक्सिमिटर बेचेको हो । आफू ठगिएको शंका लागेपछि यादवले अन्य औषधी पसलमा मूल्य सोधेका थिए ।
‘३२ सयमा खरिद गरेको अक्सिमिटरको वास्तविक भाउ एक हजारमात्र परेको थाहा लागेपछि आश्चर्य लाग्यो । तर, किनिसकेपछि फिर्ता गर्न गइनँ । राखेको छु । बिल दिन नमानेका कारण पनि धेरै बढी पैसा लिएको शंका लाग्यो’,उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘कारवाहीमा पर्ने डरले बिल नदिएको रहेछ ।’ उनले बढी मूल्य लिएर सामान बेच्ने त्यस्ता पसलेलाई अनुगमन गरी कारवाही गर्न स्थानीय प्रशासनसँग माग गरेका छन् ।
फार्मेसी संचालक सरोज यादवले ३२ सयमा अक्सिमिटर बिक्री गरेको स्वीकारे । बजार भाउ एक हजार रहेको जिज्ञासामा उनले भने, ‘हजार रुपैयाँ त होइन्, १२ सयसम्ममा खरिद गरेको छु । यो पहिलेको रेट हो । पछिल्लो समय १८ सयमा खरिद गरेको थिएँ । तर मौज्दात पनि सकिसक्यो । अहिले बाहिरबाट ल्याउनुपर्दा ३५ सयसम्ममा बेच्नुपर्छ । बेच्छु ।’
प्रकाशित: २०७८ वैशाख २३ गते १८:२२